Kukumbirwa kuti vadzoke kuna Jehovha (1-3)
Kurumbidza nemiromo (2)
Israeri anobatsirwa kuti avezve akatendeka (4-9)
14 “Dzoka kuna Jehovha Mwari wako iwe Israeri,+Nekuti kukanganisa kwako kwakakupiringisha. 2 Dzokai kuna Jehovha mutaure mashoko aya,Itii kwaari, ‘Tiregerereiwo kukanganisa kwedu+ uye gamuchirai zvakanaka zvatinokuitirai,Uye tichakurumbidzai nemiromo yedu+ sekukupai kwatinoita zvibayiro zvemikono midiki yemombe. 3 Asiriya haizotiponesi.+ Hatizotasvi mabhiza,+Uye hatizotizve, “Haiwa Mwari wedu,” tichidaro kubasa remaoko edu,Nekuti ndimi munonzwira nherera tsitsi.’+ 4 Ndichavabatsira kuti vavezve vanhu vakatendeka.+ Ndichavada ndega zvichibva pamwoyo,+Nekuti handisisina kuvatsamwira.+ 5 Ndichaita sedova kuna Israeri;Achatumbuka seruvaUye midzi yake ichadzika seyemiti yekuRebhanoni. 6 Tumapazi twake tuchareba,Achange akanaka semuti wemuorivhi,Uye kunhuhwirira kwake kuchaita sekwemiti yekuRebhanoni. 7 Vachatangazve kugara pamumvuri wake. Vacharima zviyo,* uye vachatungira semuzambiringa.+ Mukurumbira wake uchaita sewewaini yekuRebhanoni. 8 Efremu achati, ‘Ndichadirei zvidhori?’+ Ndichamupindura uye ndichamuchengeta.+ Ndichaita semujunipa wakasvibirira. Muchawana michero pandiri.” 9 Ndiani akachenjera? Kana aripo ngaanzwisise zvinhu izvi. Ndiani akangwara? Ngaazvizive. Nekuti nzira dzaJehovha dzakarurama,+Uye vakarurama vachafamba madziri;Asi vatadzi vachagumburwa madziri.